*HLALA & UDLALE* 5000 sq. Indawo yoMzimba, uMphathi wesiNtu kunye neLoft!
Bothuse abantwana bakho!!! Le Gym yokuGqibela amandla ngumntwana ngamnye omncinci kunye nePhupha laBantwana abaKhulu lizalisekile! Dlala, gxuma kwaye ukhwele ude ulale kwi-shiplap-eveziweyo yezitena, okanye indawo enobuqhetseba yokujonga indawo yokuzivocavoca! Yonwabele esi sithuba sefantasy nabantu obathandayo! Uya kulala njengosana emva kokuphonononga kunye nokugxumeka kwindawo yokuzivocavoca kwimiqamelo yethu ephezulu yoomatrasi. Yonwabela 'Amava' kunye 'neNdawo yokuHlala' zonke ngaxeshanye! Oku kuya kuba yindawo ongasoze uyilibale!
Nge-WIFI yethu enkulu, yiza phakathi evekini kwaye abantwana banokwenza umsebenzi wasekhaya we-intanethi kwi-foam pit, kwi-tramp, kwi-loft okanye kwi-lounged kumgangatho we-gym! Ngalo lonke ixesha abazali besebenza kwi-intanethi etafileni okanye kwi-Master! Yindlela entle yokudibanisa isikolo sasekhaya ngexesha lokuvalelwa!
Wothuse umntwana wakho ukuba unomhla wokuzalwa ngohambo kunye nokuhlala ubusuku kwindawo yethu yokuzivocavoca! Iya kuba lusuku lokuzalwa olukhunjulwayo!
Ukuhleka kulindeleke kwaye FUN ayiphepheki kule 5000 iinyawo square indawo yokudlala amaphupha! Uya kuba nendawo yokuzivocavoca yabucala yonke kuwe ngexesha lokuhlala kwakho, kunye negumbi lokulala le-Master elitofotofo kunye negumbi lokulala eliphezulu.
Kukho i-microwave, ifriji encinci kunye netafile enkulu yekhitshi. Ikhitshi elitsha lendlu yasefama, elinendawo yokupheka kunye nefriji yobungakanani obugcweleyo yenza esi sithuba siMalingo kwaye sisebenze! Uya kuba negumbi lokuhlambela labucala elibandakanya iwasha egciniweyo kunye nesomisi, ishawa yangoku (akukho bhafu) kunye nendawo ebonisiweyo yamanenekazi amancinci ebomini bakho :)
I-Loft ibandakanya oomatrasi ababini abakhulu abajonge indawo yokuzivocavoca. Iivenkile ze-USB kwindawo ephezulu kunye nenkosi, yenza ubomi bulungele abancinci nabancinci entliziyweni!
Ileli ikhokelela kwi-loft efanelekileyo kunye nobuchule bejimu. Ngubani ongafuniyo ukulala kwi "LOFT"! Igumbi lokulala elikhulu linemigangatho yakudala yomthi oqinileyo, izitena eziveziweyo zakudala kunye ne-shiplap entsha yokugqibezela inkangeleko. I-Master ine-tv yayo yabucala ngelixa indawo yokuzivocavoca ine-tv yesibini efumanekayo ukuze bonke abakwiqela lakho babelane. Umnyango wangaphambili unekhamera kunye nokubeka iliso kukhuseleko lomntu wonke. Oomama bethu abawayo nabadanisayo bayakuthanda ukubukela abantwana babo kwiiklasi ezahlukeneyo. Ngenxa yokuba sinezitudiyo ezimbini zokudanisa kwisakhiwo, uya kubona iimonitha kunye neekhamera kwiindawo zikawonkewonke. Ezi klasi zokuhlola iiprojekthi eziqhubekayo ukuze abazali bakwazi ukujonga abafundi abasuka kwiilobhu zombini. Ungakhathazeki, akukho khamera kumagumbi okulala, kumagumbi aphezulu, amagumbi okuhlambela okanye kwiindawo zabucala. Uya kukwazi ukonwabela ukusebenza kwi-lap top yakho okanye ukutya etafileni ngelixa ubukele abantwana bakho kwi-monitor edlala kwindawo yokuzivocavoca. Senza kube lula kuwe ukuba ube namehlo ngasemva kwentloko yakho :)
Abantu abadala bayonwabela imfihlo ye-Master ehlaziyiweyo ene-100 leminyaka ubudala imigangatho yamaplanga kunye nezitena eziveziweyo!
Songeze iprojekti kwindawo yethu yokuzivocavoca enomfanekiso omangalisayo we-25 iinyawo x 16 iinyawo! Awunako nje ukonwabela iimuvi zakho ozithandayo, kodwa imidlalo yezemidlalo iba bubungakanani bobomi, izithethi ezikhuthazayo zenza umbono ongapheliyo, iividiyo zeentsapho zakho zasekhaya zizisa ukuhleka kunye nokuphonononga ifilimu yomdlalo wamaqela akho iyazithethela! Sisixhobo esikhulu sokufundisa kunye nesixhobo sokudibanisa! Izinto ezinokwenzeka azipheli kwaye azilibaleki !!!
Ikhitshi lethu libonelela ngefriji egcweleyo enesikhenkcisi, umphezulu wokupheka wombane ophathwayo, i-oveni ephezulu yetafile, imicrowave, itoaster kunye nomenzi wekofu. Wamkelekile kakhulu ukuba upheke, utye ngaphandle okanye u-odole ukhuphe kwiindawo zethu zokutyela ezimangalisayo!
***ASIKUVUMELI NAPHI NA IZILWANYANA NGEZILWANYANA NGENXA YOKWALIWA. NGENXA YOKUKHUSELA ABAFUNDI BETHU ABANGAZIWAYO KAKHULU, ASIKWAZI UKUVUMELA IZILWANYANA KWISAKHIWO. ENKOSI NGOKUQONDA NOKUNCEDA UKUKHUSELA ABANTWANA BETHU :)
Saziwa ngeendlela zethu ezimangalisayo ze-ATV (Piute Trail) kunye nokuzingela kunye nokuloba.
I-Salina yi-hub edibanisa i-1-70, i-89, kunye ne-50 ukusuka kwi-I-15.
Thina kuphela 18 imizuzu ukusuka Richfield (Sevier Valley Events Centre), 50 imizuzu ukuya Fish Lake, 35 imizuzu ukuya Fremont Indian State Park, 11/2 iiyure Capitol Reef, 21/2 iiyure Canyon Lands National Park, 21/2 iiyure ukuya eZiyon National Park, 35 imizuzu ukuya Big Rock Candy Intaba, 2 iiyure Bryce Canyon, 30 imizuzu ukuya Manti Temple, 5 imizuzu ukuya Blackhawk arene kunye 45 imizuzu Yuba State Park.
***Siyawathanda amaqela olutsha kunye nezemidlalo! Amaqela ecawe yolutsha ona 30+ ayonwabele ukuhlala ubusuku bonke ngokuyilayo! Ngomrhumo owongezelelweyo we-14.00 yeedola ngomntu ngamnye, yiza neqela lakho lonke! Iprojektha yethu enobungakanani bomfanekiso we-25 iinyawo x 16 iinyawo yenza impembelelo enomdla xa ufundisa isifundo, ukubukela isithethi esikhuthazayo okanye uphononongo lwefilimu yeqela lakho lisebenza! Umgangatho odibeneyo kunye neetrampu zenza iindawo ezintle zokuzisa ibhegi yokulala / umqamelo kunye nenkampu ngaphandle! Sidwelise igumbi lokulala, igumbi lesi-3, elinemifanekiso yendawo yokuzivocavoca. Le yeyabo banamaqela amakhulu! Le ndawo, enentaphane ye-padding kunye ne-tramps, inamava angapheliyo kunye namathuba okulala!
Iindwendwe ezongezelelweyo emini kwindawo yokuzivocavoca zi-$ 10.00 ngomntu ngamnye, ngosuku. Oku kongeza kunokongezwa emva kokubhukisha okokuqala. Nceda usithumelele umyalezo ngenani lilonke leendwendwe zasemini :)
*** Nceda uqaphele ukuba kukho ukongezwa kwe-$ 40 yokucoca intlawulo yohambo, kumaqela angaphezu kwe-15 iindwendwe.
I-Salina ibonelela ngeyona ndlela ibalaseleyo yokupheka ekhaya! Yonwabela i-El Mexicano, iHot Spot Drive Inn okanye iCafe kaMama! Zontathu zezona ndawo zithandwayo ngabantu balapha. Konwabele ukuhamba-hamba unyuka usehla kwisitrato esikhulu saseSalina okanye kwiindawo ezikufutshane nezithandekayo. IVenkile yeeDola kunye nevenkile yokutya yibhloko enye kuphela yokuhamba umgama.
Ndihlala nje imizuzu eli-10 kude kwaye ndingakunceda ngayo nayiphi na iimfuno zakho ngexesha lokuhlala kwakho.